Maitiro ekugadzira - Ikkaro
kudzidziswa >> Maitiro ekugadzira
Faira chinyorwa: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ReamerMachineSpiral.jpg
Kudzoreredza inzira yekubvisa chip iyo iwe yaunoda kuwedzera gomba uye kuzadzikisa kumwe kupedzisa kwepamusoro uye kumwe kushivirira kwekuenzana. Saka ndiko kupera kwemakomba akagadzirwa mureamer.
El reamer chishandiso chakafanana neiboora, kwatinoti tiite mafambiro maviri, imwe yekutenderera pane yayo axis uye imwe ye rectilinear kusuduruka pamwe neiyo axis.
Tinogona kuita apedza nemuchina chishandiso kana nemawoko.
Kudzoreredza kunofanirwa kuitwa pakumhanya kwakaderera kumhanya. Chinhu chidiki kwazvo chemidziyo chinofanira kubviswa.
La metrology Icho chiitiko chakakosha mune chero kambani yakatsaurirwa kugadzira zvinhu. Mazuva ano chero chidimbu chinofanirwa kuzadzisa akateedzana hunhu hwemhando, zviyero, kupedzisa kwepamusoro uye kushivirira. Izvi zvinotsanangura hunhu hwechidimbu. Mumwe purofesa wangu akatsanangura mhando sekugona kuburitsa zvakafanana zvikamu mukati meimwe parameter
Metrology Iyo sainzi inobata nekudzidza kweanopima mayuniti uye maitiro ekuyera.
Musangano Metrology Icho chikamu chekuyera mukugadzirwa kwemishini.
Chinangwa cheMetrology ndechekuona chiyero uku ichipawo margin yayo yekusava nechokwadi.
Kuyera kunogona kuve:
Direct: patinowana zvakananga kukosha kwechiyero
Mazano: apo kukosha kwacho kunowanikwa semhedzisiro yekuita akateedzana mashandiro
Kana iwe uchirangarira apo nyaya ye JIT (Just-In Nguva) kana Toyota nzira, zvirokwazvo icharidza bhero iyo Kanban pfungwa. Chaizvoizvo inzira yeruzivo inokwanisa kupa hukuru kutonga kune maitiro ekugadzira, ichiita kuti fekitori riwedzere. Kunyanya kana paine kubatana pakati pekambani dzinoverengeka dzinopa zvikamu kana zvigadzirwa zvekugadzira.
Iyi system inozivikanwawo sekadhi system, sezvo yakavakirwa pakushandiswa kwemakadhi akareruka panoratidzwa ruzivo rwakakosha nezve izvo zvinhu, sekunge chapupu chegadziriro yekugadzira. Nekudaro, ne iyo digitization yemakambani, zvave zvichikwanisika kugadzirisa echinyakare makadhi masisitimu (post-iyo) kuvasanganisa iwo nedhijitari masisitimu.
CNC yekuverenga manhamba ekudzora michina
ari nhamba yekudzivirira michina Ivo ikozvino varipo mune akawanda maindasitiri, uye zvakare mune mamwe makambani senge mashopu uko simbi kana zvimwe zvigadzirwa zvakagadzirwa. Nemhando iyi yemuchina zvinokwanisika kuchengetedza nguva uye kugona kuita machining ezvikamu zvine hunyanzvi zvakanyanya kupfuura nzira dzemanyorerwo nemamwe marudzi ezvekushandisa zvinobatwa nevashandisi vachishandisa mawhewheels, levers, kana nemaoko avo.
CNC inomirira Computerised Numerical Control kana komputa
Rudzi rwemuchina uyu rwakawana kunatsiridza zvakanyanya kunaka kwezvidimbu zvakawanikwa, yakaderera mitengo, inowedzera kugadzirwa, uye chii chakanyanya kukosha, kuwana homogeneity yakakura pakati pezvikamu zvinogadzirwa nenzira idzi.
Faira chinyorwa: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lego_Color_Bricks.jpg
Kunyangwe zvingaratidzika kunge zvakafanana neiyo extrusion, hapana kanganisa jekiseni kuumbwa ne extrusion. Mune ino kesi, mafuru anoshandiswa panzvimbo yefa, kunyangwe chikamu chekutanga cheichi chiitiko chingaite senge extrusion.
Kune akawanda maindasitiri maitiro ekuumba zvikamu, chimwe chazvo chiri extrusion. Mune ino kesi, yakachipa uye inoshanda zvakanyanya kune akawanda akapfava kana akakanda zvinhu izvo zvinogona kuumbwa chaizvo chaizvo uye nekukurumidza nemaitiro aya.
Chengetedza jekiseni kuumbwa, sezvo isina kufanana asi kakawanda yakavhiringidzika.
Mavhidhiyo e2 MAM5 72 Axis Industrial CNC Milling Machines
Chero ani asina kumbovaona vachishanda vane chokwadi chekushamiswa neizvi Maindasitiri CNC ekugaya michina (Yenhamba Kudzora Kucheka Machines). Izvo chaizvo zvinoshamisa zvetekinoroji iyo mutengo wayo unotenderera kutenderera € 300.000